WAA WAREEY: UEFA & FIFA Oo Shaacisay In Kooxaha Waaweyn Ee Yurub Iyo Ciyaartoygooda Laga Mamnuucayo, Champions League, Horyaallada Iyo Ciyaaraha Caalamiga Ah - Laacib
HomeWararka Champions LeagueWAA WAREEY: UEFA & FIFA Oo Shaacisay In Kooxaha Waaweyn Ee Yurub Iyo Ciyaartoygooda Laga Mamnuucayo, Champions League, Horyaallada Iyo Ciyaaraha Caalamiga Ah
WAA WAREEY: UEFA & FIFA Oo Shaacisay In Kooxaha Waaweyn Ee Yurub Iyo Ciyaartoygooda Laga Mamnuucayo, Champions League, Horyaallada Iyo Ciyaaraha Caalamiga Ah
Xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa shaaciyey in kooxaha waaweyn ee Yurub ee samaystay tartanka Super League, in laga mamnuuci doono ka qayb-galka tartamada Champions League iyo horyaallada maxalliga ah, isla markaana ciyaartoygooda loo diidi doono in ay ka qayb-galaan kulamada caalamiga ah oo aanay dalalkooda u ciyaari doonin.
Kooxaha Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, AC Milan, Inter Milan iyo Juventus ayaa samaystay tartan cusub oo ay iyagu gaar u leeyihiin, kaas oo ay kula soo biirayaan saddexda kooxood ee PSG, Bayern Munich iyo Borussia Dortmund, sidaasna tiradoodu ku noqon doonto 15, ayna kusoo darsan doonaan shan kooxood oo isreeb-reeb soo gelaya.
Tartankan cusub oo guddoomiye looga dhigay madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez ayaa waxa uu la kulmay mucaaradad weyn, waxaana xaqiiqo noqotay in uu burbur u horseedayo horyaallada maxalliga ah iyo Champions League intaba.
FIFA iyo UEFA ayaa qaadaya tallaabooyin ay ku joojinayaan in horyaalka Super League uu hirgalo, waxaabay ku hanjabeen in ciyaartoyda kooxahani aanay u ciyaari doonin qaramadooda oo laga mamnuuci doono, sidoo kalena iyaga iyo kooxahooduba aanay qayb ka noqon doonin horyaallada dalalkooda iyo Champions League intaba.
Inkasta oo war-saxaafadeed ay soo saareen kooxahani xalay fiidkii ay ku sheegeen in ay FIFA iyo UEFA kala arrinsanayaan horyaalkan, haddana labada xidhiidh oo ay wehelinayaan horyaallada dalalka waaweyn sida Premier League, LaLiGA iyo Serie A ayaa waxay meel adag iska taageen horyaalladan.
UEFA ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku tidhi: “Kooxda iyo ciyaartoyga ka qayb-gala Super League, waxa laga ganaaxi doonaa dhamaan tartamada ay maamulaan UEFA iyo FIFA ee Champions League/Europa League ama heerka caalami (Koobka Adduunka) iyo kuwa qaaradaha.”
FIFA ayaa iyaduna si gaar ah u sheegtay in ay u taagan tahay kobcinta ciyaaraha, ayna meel adag iska taagayso tartan kasta oo gooni-u-goosi ah oo ay kooxo gaar ahi meel iskugu urursanayaan, ayna samayn doonto wax kasta ama tallaabo kasta oo arrintaas lagu joojinayo.
Si kastaba, kooxaha waaweyn ee sare ku xusan ayaa horyaalkooda Super League waxay ka helayaan lacago badan, iyadoo koox kastaaba xilli ciyaareedkii heli doonta lacag kor u dhaafaysa 300 milyan oo Gini.